Soo Iibso Spaghetti Strap Faashad V-qoorta dhabarka Split Satin Satin - Maraakiibta Bilaashka ah & Canshuur La'aanta | WoopShop®
Faashadda Spaghetti Faashadda V-qoorta Laab Kala Bixin oo Satin ah
Color sida sawirka 3 sida sawirka sida sawirka 2
sida sawirka 3 / S sida sawirka 3 / M sida sawirka / XL sida sawirka / XXL sida sawirka 3 / XXL sida sawirka 3 / L sida sawirka 3 / XL sida sawirka 2 / L sida sawirka 2 / XL sida sawirka 2 / S sida sawirka 2 / M sida sawirka / M sida sawirka / L sida sawirka 2 / XXL sida sawir / S
Faashadda Spaghetti Faashadda V-qoorta dhabarka u kala baxda Dharka Satin - sida sawirka 3 / S gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nambarka Tusaalaha: 19936
Ogow: Fadlan si taxadar leh u raac tusaha qiyaasta cabbirka si aad u dooratid cabbirka. Ha u dooran sida tooska ah sida caadooyinkaaga. Wali ma hubo cabirka? Waxaan jeclaan lahayn inaan kugula talinno adiga oo ku saleynaya cabirkaaga buska, dhexda, iyo sinta. Cabirku wuxuu yeelan karaa kala duwanaansho 2-3cm sababtoo ah cabirka gacanta. Fadlan la soco markaad cabireyso Soo jeedinta biyo qabow gacmaha lagu dhaqo. Waxay ka caawin kartaa walxaha inay ilaashadaan qaabkooda.
Aad u fiican, dharka ayaa tayo fiican leh, ka taxaddar ma aha madow ee waa buluug buluug ah
Dharka ayaa qurux badan. Midabku wuu ka duwan yahay sawirka iibiyaha, wuxuu dalbaday reexaanta, wuxuu u yimid si tartiib ah buluug, laakiin sidoo kale qurux badan. Qaabka urta, laastikada dhexda. Suunka lagu daray ⠀ Cabbirka S, ee ku saabsan xuduudahayga 83-65-89 tuulada way wanaagsan tahay, oo ku habboon xaddidyada waaweyn. Waan ka helay waxyaabaha, cufnaanta dhexdhexaadka ah, ma shidayso koronto, taas oo muhiim ah.